Tenga Wireless ABS Physiotherapy Magetsi EMS Tsoka Massager - Kutakura Mahara & Hapana Mutero | WoopShop®
Wireless ABS Physiotherapy Magetsi EMS Tsoka Massager
Ngarava Dzinobva China nyika dzakabatana United Kingdom Ositireriya Furanzi Itari Czech Republic Porendi SPEINI
China nyika dzakabatana United Kingdom Ositireriya Furanzi Itari Czech Republic Porendi SPEINI
Wireless ABS Physiotherapy Magetsi EMS Tsoka Massager - China yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Item Rudzi: Massage & Relaxation
Muenzaniso Nhamba: A10979
Kukura: 31 * 31cm
Zita: EMS Tsoka Massager
Inofambiswa ne: 2 * AAA bhatiri (Haisi Kuiswa)
Feature: Inosimudzira kutenderera kweropa, inodzikamisa tsoka
Inokurudzira kutenderera kweropa uye inodzikamisa tsoka.
Yakapfava uye yakagadzikana yoga mat zvinhu tsoka.
Ganda-rinoshamwaridzana sirivheri ion redunhu kudhinda
Yakaparadzanisa mainuniti, iyo pasi matai inogona kucheneswa nemucheka munyoro.
Tsoka tsoka inogadzirwa neyakareruka inoshanduka PU zvinhu, uye kusimba kwayo kunoshamisa. Uye nekuti inoshandisa yepamusoro-soro inoitisa zvinhu, tsoka yemutsara inopetwa uye inotakurika.
Ichi chigadzirwa hachina mvura, saka usabata chigadzirwa nemaoko akanyorova, usachigeza nemvura, kana kudira mvura yacho.
Tsvaira tsoka uye pukuta nejira rakaoma usati washandisa.
Usashandise nekutonhora kana kudziya sezvo paine njodzi yekushanduka. Zvakare, usashandise chigadzirwa ichi nemvura inodzika kana kamwe kamwe tembiricha shanduko kune ichi chigadzirwa.
Usashandise kana uine chirwere chemoyo kana uine pamuviri
Usashandise pamwe chete nezvimwe zvigadzirwa zvemagetsi kana zvigadzirwa zvekunaka. Zvinogona kukonzera matambudziko ehutano.
1 x Main mutungamiriri
Yakarongedzwa mubhokisi rezvitoro
vvv yakanaka & yakakura dhizaini
SEZVAKAITWA. FAST KUTUMIRA KUUK. WAITA HAKO.
Kune avo vane basa kutsoka kwavo uyu massager ingori yekuwana) Achiuya kubva kubasa anokuzorodza uye nekupa kunakidzwa kwemakumbo ako) Massager anouya mune yevakadzi fimenical bhokisi. Mukati mune jira retsoka uye chikamu chinodzora chemassager + kuraira) Kune kanivhasi yekusungira chikamu chekubatsira nerubatsiro rwema rivets) zvese zviri nyore) iyo massager yakagadzirira kushanda) Inoshanda kubva ku2 AAA mabhatiri. Iwo anokwana kwenguva refu kushandisa) Iyo massager haizi vibrate. Kukurudzira kunouya kubva kumagetsi emagetsi (iko kunzwa kunorova ikozvino) Pane nzira nhanhatu dzekushanda. Kubva pane isina kusimba kusvika kune yakasimba simba kukurudzira) ini ndinoshandisa 6 kana 1 simba) zvimwe kwandiri zvakatowanda) Kunzwa kutonhorera) Ini ndinoshandisa iyo 2-10 maminetsi uye zvakaringana kwandiri kuti makumbo aizove akasununguka) Tsvaga zvaunoda) Iyo massager inoitwa zvinehunhu. Kubasa hapana zvichemo, zvese zvinoshanda zvakajeka) Iyo bonde haigone kunyorova uye kusuka!) Kuendeswa kuRB mavhiki matatu)